उपचार खर्च नपाउदा विचल्लीमा वीरु-Brtnepal.com
Loading... उपचार खर्च नपाउदा विचल्लीमा वीरु
जनक केसी-जाजरकोट, १० भदौ Published on August 26, 2016 at 6:55 am
घुडाको उपचारका लागि दुइ महिना अघि अस्प्ताल भर्ना भएका विरु नेपाली ठुलो विचल्लीमा परेका छन् । भेरी मालिका नगरपालिका ३ सिमलगैरीका विरु मज्दुरी गर्ने क्रममा लडेर घुडामा चोट लागेपछि स्थानीयको सहयोगमा काठमाडौंको सुस्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा उपचारका लागि पुरयाइएका थिए । अहिले उपचार सकिएपनि अस्प्तालमा वस्दा खाएको खाना र औषधीको खर्च तिर्न नसक्दा विरु विचल्लीमा परेका हुन् । नेपालीको जेठ २८ गते काठमाडौंको शुस्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा घुडाको अप्रेसन हुदै थियो । घुडामा भएको ठुलो घाउको पिडा एकातिर थियो भने त्यो भन्दा ठुलो पिडा उनको जीवनमा अर्कै थियो। उनको घुडाको उपचारका लागि अप्रेसन हुने दिन उनकी आमा लल्ती नेपालीको चित्ता खलंगाको कालेगाउँ स्थित भेरी नदीको किनारमा जल्दै थियो ।
एकातिर आमा मरेको खवर अर्काेतिर घुडामा असहय पिडाका कारण विरु निकै चिन्तामा थिए । तर अहिले उनी झन ठुलो संकटमा परेका छन् । अस्पतालमा घुडाको घाउँको उपचार गर्दा लागेको खर्च तिर्न नसक्दा विरु ठुलो विचल्लीमा परेको हुन् । आफुलाइ सहयोग गर्ने कोहि पनि नभएपछि उनी ठुलो संकटमा परेका हुन् । वुवा र आमा दुवै नभएका अति विपन्न परिवारका विरु घुडामा भएको घाउको उपचारका क्रममा गत दुइ महिना देखि काठमाडौंको शुस्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमै छन् । शुक्रवार सम्म अस्पतालको क्यान्टीनमा कुरुवा र आफुले खाएको खाना र मेडिकलवाट ल्याएको औषधीको रकम नतिरे शनिवारवाट खान पनि नपाउने भएको विरुले फोनमा वताए । उनले अव घर जाने त के यहि वसेपनि खान नपाउने अवस्था आएको वताए ।
मज्दुरी गर्ने क्रममा घुडामा चोट लागेर ठुलो घाउँ वनेपछि अशक्त वनेका विरु जिल्ला अस्पताल जाजरकोटको सिफारिस अनुसार काठमाडौंको शुस्मा कोइराला मेमोरियल अस्प्तालमा गत जेठ २५ गते पुरयाइएका थिए । पारिवारीक अवस्था निकै दयनीय भएका विरुलाइ स्थानीय आफन्तहरुले चन्दा उठाएर जम्मा भएको ३० हजार रुपैयाले काठमाडौ पुरयाइएको उनका भाइ पर्ने उदाम नेपालीले वताए ।
उनलाइ अस्पतालमा अप्रेसन र वेड निशुल्क गरिएको भएपनि हेरचाहमा वसेको साथी र उनको होटेलमा खाएको खाना खर्च, मेडिकलमा औषधीको विल, र अस्प्तालको सेवा खर्च तिर्न नसक्दा उनी अस्पतालवाट घर फर्कन त के वाहिर निस्कन समेत नसक्ने भएका छन् । उपचार सकिएर घर फर्कने वेला हुन लागेपनि अस्पतालवाटै वाहिर निस्कन ६० हजार तिर्नु पर्ने भएपछि उनी विचल्लीमा परेका हुन् । पैसा नभएका कारण अस्प्तालमै विचल्लीमा परेका विरुले दिनमा चार पाँच पटक रुदै फोन गर्ने गरेको र आफु पनि विपन्न भएका कारण सहयोग जुटाउन नसकेको उदामले वताए । अस्पतालका एक डाक्टरले व्यक्तिगत रुपमा ८ हजार सहयोग गरेको भएपनि धेरै रकम तिर्नु पर्ने भएपछि आफुहरु समस्यामा परेको उनले वताए ।
उता विरु नेपालीले रुदै नागरिकसंग भने मेरो यो सन्सारमा आफनो कोहि छैन म कसरी यो अस्पतालवाट वाहिर जाउँ? गोजीमा ५ रुपैया पनि छैन तिर्नु ६० हजार छ अव के गरौं, उनले भने । सुरुमा त गाउँमा गाउँलेले चन्दा उठाएर केहि सहयोग गरे अव मलाइ कसले सहयोग गर्छ? उनले दुखेसो पोखे । सहयोगका लागि धेरै ठाउँमा गुहारेको तर कसैले वास्ता नगरेको उनले गुनासो गरे । म ठुलो नेताको छोरो भएको भए सरकारले पनि सहयोग गथ्र्याे होला तर मलाइ कसले हेर्छ? उनले रुदै भने ।
फोटो – अस्पतालको वेडमा आफन्तसंगै विरु नेपाली ।